CANAB "MEMORY DOMBKOVSKAYA": SHARAXAAD IYO ASTAAMAHA BEERAHA - CANAB
Beerto iyo daryeelka canab "Memory Dombkovskaya" ee dalka
Canab - caleemaha dhirta ee qoyska Vinogradovye, oo leh in ka badan 70 noocyada, sii kordhaya inta badan qaybaha cimilada.
Kala duwan "Xusuusta Dombkovskoy" dhadhan wanaagsan oo miro iyo midabyo badan oo berry ah.
Canab of "Xusuusta ee Dombkovskaya" ayaa waxaa soo xushay xiiso leh Orenburg Shatilov, Fyodor Ilyich oo ku saabsan soddon sano ka hor. Kala duwanaanshahan sidoo kale waxaa badanaa lagu magacaabaa kala duwanaan la'aanta jiilaalka madow ee jiilaalka (CSR).
Fyodor Ilyich ayaa ugu yeeray noocyada kala duwan ee canab inay calaamad u tahay xushmeynta saaxiibkiisa Yanina Dombkovskaya, oo isaga la shaqeeyay. Si loo helo noocyada kala duwan ee "Xusuusta Dombkovskaya", tarbiyadu waxay dhaaftay "Dawn of North" oo ay la wadaagaan noocyada kala duwan ee "Kishmish gaar ah." Muddo ka dib, Fedor wuxuu soo maray tobanaan kumanaan gooyn ah beeraha beerta Chelyabinsk, halkaas oo beergooyska aan fiicnayn ee canabka ee ChBZ la koray.
Tilmaamaha iyo sifooyinka gaarka ah
Canab "Memory Dombkovskoy" wuxuu leeyahay sharaxaad xiiso leh, hoosna waa sawir. Kala duwanaantu waa miis-soodh. Kala duwan geedo xoog leh oo degdeg ah iyo xawaashyo xoog leh. Dhamaadka wuxuu koraa shan mitir xilli xilli xitaa si buuxda u dhicin xitaa xaaladaha ba'an. Leaves leh petioles dheer oo ah cagaar madow midabka, iyo berry yihiin dhexdhexaad ah size, koraan ee kooxaha waaweyn iyo waqti isku mid ah u muuqanayaan ku dhowaad madow.
Waxay wax ka qabataa badhtamaha Agoosto ilaa dhammaadka Sebtembar (waxay dhammaan ku xiran tahay cimilada). Berry bisil, kaas oo sii wadi inay koraan on baadiyaha, ha cracker iyo noqdaan badan oo ka badan macaan. Iyo dhamaadka dayrta ku noqo nooc nooc oo sabiib ah. Midabka berrito ee berry berry leh dhadhan macaan-macaan.
Waxaan kugula talinaynaa in aad barato noocyo kale oo canab ah oo madow: "Fun", "Viking", "Isabella", "Ruslan", "Gala", "Sphinx", "Volzhsky".
Sida noocyo kala duwan, canab "Xasuusta of Dombkovskaya" waxay u baahan tahay xaalado koriin khaas ah. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay waraabinta saxda ah iyo carrada ku habboon.
Waa muhiim! Waxaa fiican in aan la kallifin duurka u leh dalagga, sababtoo ah kiiskan dhadhanka berry ayaa laga yaabaa inay sii xumaanayso: waxay noqon doonaan acidic ka badan ama xitaa bilaabaan inay dhadhamaan qadhaadh.
Grape "Memory Dombkovskaya" waxay u baahan tahay iftiinka qorraxda sida ugu macquulsan. Iyadoo ku saleysan arintaas, xal macquul ah ayaa noqon karta in la beero duurka koonfureed ee goobta.
Burburka waa mid aad u dalbanaya ciidda, sidaas darteed haddii ugu dambeyntii ma laha bacriminta sare, waxaa jira baahi loo qabo in lagu soo saaro Bacriminta organic.
Kala duwanaantu waxay jecel yihiin carrada loamy ama carrada madow, laakiin ma u dulqaadanayaan dhulka ay biyuhu istaagaan. Ciidda canabku waa in la diyaariyaa kahor si ay u hesho waqti ay ku degto.
Sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo wax-qabadka soo socda:
Ka qodo tirada saxda ah ee godadka hal mitir iyo fogaan ah 1.5-2 mitir u dhexeeya.
Ku rid jubbada ama dhagaxyada godadka, taas oo u adeegi doonta sida dheecaan.
Ku rid humus ku qasan bacriminta fosfate-potassium on top.
Si nabdoon u xiirto godka dhexda ee godka kaas oo geedka canabka ah lagu xiri doono.
Ka dib tallaabooyinka kor ku xusan, u ogolow ciidda nasasho dhowr toddobaad.
Xeerarka beeritaanka canab "Memory Dombkovskaya"
Waa arrin aad muhiim u ah in la beero duurka si ay u keento berry dhadhan fiican leh iyo beeraha iyo bannaanka bannaanka in ka badan hal sano.
Waa in la ogaadaa in geedo ka fiican inaad dooratid xilliga dayrta, sababtoo ah markaa waxay hubaal noqon doonaan kuwo cusub. Guga waxaad halis ugu jirtaa inaad iibsato safo qalalan leh xididada barafaysan, sababtoo ah lama ogeyn sida loo kaydiyey xilliga qaboobaha. Faa'iidada iibsiga xilliga dayrta ayaa been ah xaqiiqda ah in aad arki karto berry ee kala duwan ee "Xusuusta of Dombkovska" indhahaaga u gaar ah. Haddii aad go'aansato in ay ku beeri canab guga, fiiro gaar ah si geedo sii kordhaya koray ee baakooyinka.
Waxaa suurtogal ah in lagu beero baadiyaha labadaba guga, iyo dayrta. Laga bilaabo Abriil ilaa Maajo, geedo hal sano jir ah oo qoryo ah waa in la beeraa, iyo dabayaaqadii May ilaa June - cagaarka dhirta cagaaran. Xilliga dayrta, canabku waa la beeray laga bilaabo Oktoobar ilaa ciidda la dhigo. Tiknoolajigu waa isku mid sida beeritaanka guga, si kastaba ha ahaatee, geedo lagu beeray xilliga dayrta waxay u baahan doonaan in si taxadar leh looga ilaaliyo dhaxan.
Beeridda waa in lagu sameeyaa ciidda hore loo diyaariyey (sida ku xusan talooyinka kor ku xusan). Sidaas, ee godka, kaas oo horay ku shubtay lakabka ah ee dheecaan iyo humus, waa inaad gelin seedling leh xididdada toosan iyo si tartiib ah kula saydhaa leh dhulka. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad ku tuujiso dhulka hareeraha iyo ku shub biyo diirran. Waxaa lagugula talinayaa in mulch la baadho leh filim mugdi ama caws buufiyo for kulaylinta fiican.
Iyadoo habka saxda ah ee waraabka iyo bacriminta, waxaa suurtogal ah in lagu gaaro Bisaylkiisa si deg deg ah ee ay duurka iyo, ka dibna, soo saarka badan oo ballaaran oo berry ah. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado sida si habboon u jaraan canab of "Xusuusta ee Dombkovskaya".
Faydhidda nadiifinta waraabinta waxaa la sameeyaa xilliga dayrta, ka dib markii caleemaha canab ah lagu hoyday xilliga jiilaalka. Haddii dhulku galo jiilaalka, waxay noqon doontaa mid aad u xun canab. Haddii dayrta uu ahaa roobab, waa inaadan isticmaalin nooca waraabinta. Guga, waraabinta this waxaa la sameeyaa ka dib markii canabkiinna la xirxiray.
Dhirta waraabinta waxaa la sameeyaa marka geedka ugu baahdo. Sidaa darteed, baahida loo qabo waraabinta noocan oo kale ah waxay dhacdaa ka hor furitaanka peephole iyo inta lagu jiro dejinta iyo koritaanka berry. Qeybta labaad ee xagaaga, duurka waa in aan la waraabin. Sidaas, labadii toddobaad ka hor goosashada, waxaa lagama maarmaan ah in la joojiyo waraabin kasta oo ciidda. Dheecaan waraabinta waxaa inta badan loo isticmaalaa by amateurs ee beertooda yaryar. Sidaa awgeed, tuubooyinka asbestosku ka samaysan yahay waxaa lagu dhufanayaa safka (dhexroorka - 100-150 mm, qoto dheer - 40-50 cm). Carrada kor ku xusan waa in ay ku sii jirtaa qiyaastii 10 cm. 10-20 godadka yaryar waa in laga qodaa xagga hoose ee tubada. Ka dib markii tuubada la rakibay, dhammaadka sare waa in la xiro si looga fogaado qashin qubka. Noocyada waraabkan waa mid aad u habboon oo wax ku ool ah, sababtoo ah biyaha ayaa isla markiiba tagaya xididdada dhirta, taas oo saameyn wanaagsan ku leh dhinaca danbe.
Ma taqaanaa? 71% wadarta geedka canabka ah ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo khamri, 27% ayaa la cunay cusbo, 2% waxaa loo isticmaalaa sabiib.
Ku saabsan quudinta kala duwan "Xusuusta Dombkovskaya" waa in la xusuustaa xitaa marka baadiyaha aysan soo toosin. Guga hore, inta uu jiro baraf, waxaa lagama maarmaan ah in la kala saaro superphosphate ee granules (qiyaastii 40 g halkii mitir) oo ku yaal godadka ku dhow. Sidan oo kale, waxaan ka taxadarin doonaa awooda toosan ee geedka canabka ah. Quudinta soo socota waa inay dhacdaa bisha May ee qaabka nitrogen, taas oo ka caawisa dhirta si ay u kordhiso tirada cagaaran. Ka dib markii burooyinkuna ay bararsan yihiin, geedka canabka ah u baahan tahay biyo faleebo ee digada digaag, sababtoo ah waxaa ku jira a badan oo nitrogen, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee waxtar raad.
Si aad u diyaariso faleebo waa in ay raacaan qaacidadan: 1 qayb ka mid ah substrate-ka dareeraha ah waa in lagu qasaa laba qaybood oo biyo ah oo ka tagay si nasasho ah toddobaad. Marka xiga, xalkan waa in lagu qasiqiyaa biyo leh cabirkiisu yahay 1:10 iyo biyaha canabkiisa la filayo hal litir oo geedka. Kadib sameynta canab bacrimin ah waxay u baahan tahay inay ku shubto biyo badan.
Noocyo cajiib leh oo ah canab buluug ah oo leh miis ujeedo loo isticmaalo: "Xasuusta Negrul", "Pretty Woman", "Moldova", "Codreanca".
Canab dhoobo - dhacdo sanadle ah si loo soo gaabiyo laamaha dilka ah iyo caleemaha sannadlaha ah. Si aad manjooyin waa in la bilaabo october ka dib markii caleen dayrta. Sidaa darteed, laanta ka baxda, waxaad u baahan tahay inaad ka tagto oo keliya laba laan oo horumar leh oo baaluqan oo ku yaal saldhiga.
Inta kale ee aan qoomameynin waa in laga saaraa. Marka xigta labada laan ee baahida hoose ee loo baahan yahay in la gooyo laba buro, iyo sare - ilaa 7-15. Sidaa darteed, waxaan leenahay labo canab ah oo dherer kala duwan ah, oo la yiraahdo xiriirka miro.
Caleemaha soo socda ee soo socda ayaa kori doona geedka canabka ah iyo sidoo kale qashinka la goosanayo. Waxaan samaynay geedka canabka ah oo dheer si ay u dhalaan dalag (taas oo ah, waa qeybta miro). Gaaban waa in uu koro labo canab ah oo cusub si uu u sameeyo geed canab ah oo sanadka soo socda (qaybta koritaanka).
Waa muhiim! Goolashada noocan oo kale ah waa in la sameeyaa sannad kasta iyada oo aan lagu guulaysan.
Kala duwanaanshaha "In Memory of Dombkovskaya" ma aha mid u nugul weerarrada fangaska iyo cayayaanka kala duwan, si kastaba ha ahaatee, weli ka baqdo xagta iyo oidiyum, sidaas darteed ma noqon doonaa mid aad u badan in ay canab buufin ujeedada ka hortagga.
Sidaa darteed, xayrtu waxay ka caawisaa in lagu buufiyo 2% dareeraha Bordeaux, iyo si looga hortago baahida loo qabo in lagu buufiyo 5% xal of copper sulphate. Laga soo bilaabo oidiyoon waxay xajisaa 5% xalal potassium ah ama cusbada cusbada. Waxa kale oo qiimo leh in la tixgeliyo in haddii canab ah on geedka canabka ah muddo dheer, ka dibna waxaa jira halis ah weeraro xun.
Tilmaamo noocyo jiilaal
Kala duwanaanshuhu sidoo kale wuxuu si aan caadi ah u adkeyn karin kuleylaha qaboobaha. Xataa haddii aad gooyay beerta canabka ah, geedka canabka ah kama dhiman doono at -28 ° C. Barafku sidoo kale ma faragelin karo noocyada kala duwan. Dabcan, ma noqon doonto mid aad u adag in la isticmaalo hoyga jiilaalka for geedka canabka ah, sababtoo ah kiiskan ma dhiman doonaa xataa at -30 ° C.
Horeba laga soo sharaxay waxay caddaynaysaa kala duwanaanta canabka "Dhamaan Xusuusta Dombkovskaya" waa xulasho cajiib leh oo bilawga ah oo doonaya in ay bartaan farsamaynta canabka sii kordhaya. Faa'iidooyinka miisaanka dhirta:
Goosashada waa mid aad u ballaaran marka la barbardhigo noocyo kale oo soo kordhaya waqooyiga (tusaale ahaan, Ural).
Cabbirta barafka ee canabku ma aha laakiin way ku raaxaysan karaan, sababtoo ah kama jawaabayso heerkulka hawada ee ugu hooseeya (illaa -30 ° C).
Cadaadiska cudurada iyo cayayaanka heer sare. Intaa waxaa dheer, waxaa suurto gal ah in dhirta loo sameeyo ka hortagga iyo xakameynta cudurrada horeba u dhaca.
Kala duwan ayaa si dhaqso ah u soo baxa, ku faraxsanaanta berry dhadhan fiican leh oo qurux badan.
Kala duwan ee "In Memory of Dombkovskaya" u dulqaadanayo ma aha oo kaliya dhaxan, laakiin sidoo kale abaarta.
Ma taqaanaa? Canab koraya ku dhowaad 80,000 mitir oo laba jibbaaran oo ku wareegsan adduunka.
Ma jiraan wax khasaare ah oo ka jira noocyada kala duwan. Canab "Memory Dombkovskaya", oo lagu xukumay by dib u eegista ee bannaanka u khibrad leh, aad u xoog leh-sii kordhaya. Geedka canabka ahna wuxuu u baxaa sidii foorno oo kale, wuuna quudhsadaa. Sidoo kale xusuusnow dhadhanka cajiibka ah ee canabkiisa sida badeecad madaxbannaan, iyo noocyada deriska (compote, casiir, khamri, iwm).
Soo koobid, waa in la sheego in canab ah "In Memory of Dombkovskaya" waa noocyo cajiib ah, ku habboon ee sii kordhaya by bilowga ah: waa wax aan qabyo ahayn ee daryeelka, waxay si fiican u dushay dhaxan iyo waqti isku mid ah siinayaa goosashada oo hodan ah ee berry dhadhan oo aan lahayn godad.